‘UPENYU PAMBERI, BHORA MUSHURE’ | Kwayedza
‘UPENYU PAMBERI, BHORA MUSHURE’
16 Apr, 2020 - 00:04	 2020-04-16T04:19:17+00:00 2020-04-16T00:06:39+00:00 0 Views
MUTAMBI weZimbabwe Warriors nechikwata cheStade de Reims chekuFrance, Marshall Munetsi, anoti panguva ino yechirwere cheCovid-19 icho chatekeshera pasi rose, upenyu hwevanhu hunofanirwa kukosheswa kudarika mutambo wenhabvu.
Achitaura svondo rino ari kuFrance uko anotambira achitambira nhabvu yake, Munetsi anoti kumiswa kwakaita mitambo yenhabvu kunyika iyi pamwe nepasi rose kwakakosha sezvo matanho akatorwa aya ari kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavirus.
“Ini semutambi wenhabvu, mutambo uyu hauna kunyanya kukosha kukunda upenyu hwevanhu. Ndinotsigira kumiswa kwakaitwa mitambo yenhabvu sezvo uku kuri kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavirus.
Kana chirwere ichi chapera hacho, tochidzokera kunotamba hedu nhabvu.
“Zvose ngatingozviisai mumaoko aMwari, zvichadarika hazvo todzokera kuupenyu hwedu hwemazuva ose,” anodaro.
Munetsi akatanga kutambira chikwata cheStade de Reims mwaka uno achibva kuchikwata cheOrlando Pirates chekuSouth Africa.
Kusvika pazomiswa mitambo yose, Munetsi ange achitamba nhabvu inonwisa mvura kuStade de Reims izvo zvakambomuona achimaka shasha Neymar Jnr mune umwe mutambo wechikwata chake necheParis St Germain (PSG) uyo chikwata chaje chakahwina 2-0. Mumutambo uyu, Munetsi akarumbidzwa zvikuru sezvo PSG ichizivikanwa pasi rose nevatambi vanoita “kuruka” bhora vachisanganisira iye Neymar Jnr, Kylian Mbappe, Edinson Cavani asi musi uyu shasha idzi dzakashaiswa mukana.
Munetsi anoti agere zvakanaka kuchikwata chaari kutambira cheReims achiti kana mumwe mukana wekuenda kune chimwe chikwata ukaiuya, achatarisa zvinomunakira.
“Ndiri kugutsikana nepandiri iye zvino, asi ndinoda kusvika kumusoro-soro nenhabvu. Ndichatungamirirwa naMwari murwendo rwangu uye kwose kwandinoenda ndiye anoziva kwandichasvika.
“Ingori nyaya yekuona zuva nezuva kuti zvinenge zvichifamba sei. Kana mukana wauya ndinoushandisa ndofambira mberi nemutambo,” anodaro Munetsi.
Nemusi weChipiri svondo rino, vanhu 18 vange vabatwa vaine chirwere cheCovid-19 muZimbabwe apo vatatu vacho vakatoshaya.